'UMengameli Zuma wangithembisa umuzi' | isiZulu
'UMengameli Zuma wangithembisa umuzi'
UZuma wahleka i-ANC ilahlekelwa omasipala abakhulu okhethweni - Makhosi Khoza
UMengameli uZuma uzovula ngokusemthethweni umgwaqo omkhulu eThekwini
UZuma ulufakele izibuko olwezinsolo ngoBongo
Durban - Eminyakeni emine eyedlule, uMengameli Jacob Zuma wathembisa uMbuso Mkhize umuzi.
UMkhize owaziwa ngelikBritsh oneminyaka engu-73 ubudala washumpulwa umlenze nengalo ngenxa yokugula. Ingezansi lakhe likhubazekile kanti uhamba nge-wheelchair.
UMkhize uhlala yedwa emzini wakhe wodaka eSnatshing eMgungundlovu, njengoba ashonelwa wunkosikazi wakhe eminyakeni emihlanu eyedlule
OLUNYE UDABA:UMengameli uZuma uzovula ngokusemthethweni umgwaqo omkhulu eThekwini
Uyalala, apheke aphinde ageze egumbini elilodwa. Amanye amagumbi amabili awasebenzi njengoba abhidliza kulandela izimvula ezinamandla. Izindonga zinezimbobo kanti namawindi aphihlikile. Umakhelwane okhelela uMkhize amanzi ngoba akasenawo amapayipi amanzi kulandela ukwebelwa.
Eminyakeni emine eyedlule, uZuma ehamba nabanye ongqongqoshe, bavakashela uMkhize emzini wakhe bamthembisa ukumakhela umuzi. Uthi ikhansela lewadi uSipho Madonda nguye owabekwa nguMengameli ukuba aqiniseke ukuthi uwuthola ngokushehsa umuzi.
"Akukenzeke lutho. Bahamba kwaphela kanjalo. Akekho noyedwa owaphinde wabuya ezobheka ukuthi kuqhubekani," kusho uMkhize.
Uthi uMadonda wamtshela ukuthi uzomtholela umuzi azohlala kuwo okwesikhashana, kodwa nalokho akuzange kwenzeke.
"Akukho engingakwenza ukumsiza. Sisalindile," kusho uMadonda.
"Ngihamba ngewheelchair. phansi akuhambeki kahle kanti uma kumanzi ophansi kuba nzima kakhulu. Ukuya endlini encane kuba nzima ikakhulukazi uma lina izulu. Iwheelchaie iyodwa nje indala. Ngisele nale yodwa ngemuva kokuboleka umakhelwane wami le enye ebenginayo," usho njalo.
"Ngidunguza ebumnyameni...Okubuhlungu kakhulu wukuthi ngiyidoda yewheelchair. Ngabanethemba ngesikhathi umengameli efika.Ngaze ngatshelwa nokuthi yimi oyosukunyelwa kuqala. Lokho kwanginikeza ithemba elikhulu," kusho uMkhize.
Okhulumela ihhovisi likamengameli uBongani Nqgulunga ucele imininingwane kaMkhize kodwa ubengakabuyeli kwabezindaba iGroundUp.